Kiraro lena mamafa
Ny famafana fanesorana makiazy dia fandroana fanary ilaina amin'ny fanesorana ny makiazy
Ny famafana ny fanesorana makiazy dia fandroana fanary azo ampiasaina hanampiana ny fanesorana makiazy, miaraka amin'ireo asa fototra fanadiovana sy fanosorana ny hoditra. Raiso ny lamba tsy tenona ho toy ny mpitatitra, ampio ilay rano fanadiovana misy singa fanesorana makiazy, ary tanteraho ny tanjon'ny fanesorana makiazy amin'ny famafana. Usua ...
Tombony azo avy amin'ny famafana ny famonoana otrikaina amin'ny fitaovana fitaizam-batana mba hiantohana ny fiarovana ny mpitsidika
Raha efa nanao fanatanjahan-tena tao amin'ny gym ianao dia ho fantatrao hoe firy ny olona mampiasa an'ireto milina ireto amin'ny fanaovana fanatanjahan-tena. Nefa alaivo an-tsaina hoe mampiasa fitaovana tsy voalamina ianao. Mampihetsi-po amin'ny bakteria sy bakteria ianao izao, izay mety hahatonga anao harary, ary amin'ny tranga henjana dia mety ...
Ny firoboroboan'ny marika famafana lena
Ny labozy famonosana lena dia mila mameno ny fepetra manokana amin'ny fametahana, ny fanokafana ary ny fanidiana im-betsaka, izay mametraka fepetra manokana manokana amin'ny famehezana marika. Amin'izao fotoana izao dia misy fironana telo amin'ny fampivoarana ny mari-pamantarana lamba famaohana lena: Fironana 1: Famaritana famehezana ...
Mamboly famaohana moka, fiarovana anao manokana
Androany aho dia te-hanome vokatra izay afaka miaro anao sy ny fianakavianao amin'ny kaikitry ny moka ary afaka mampiasa azy ireo am-piadan-tsaina. Ny moka moka azo esorina amin'ny torimaso. Raha vao manomboka ny fahavaratra, dia hisy ny moka mahasosotra indrindra amin'ny fotoana mafana satria mafana! Voakaikitra aho ...
Inona no atao hoe mamafa lena
Sarany PH: Alohan'ny hividianana solo-drano lena dia tsy maintsy mizaha toetra ny lanjan'izy ireo. Araka ny fitsipiky ny firenena, ny sandan'ny ph ny soloina lena dia tokony eo anelanelan'ny 3,5 sy 8.5. Araka ny valin'ny fitsapana dia tsaraina raha toa ka mendrika ny sandan'ny ph ny solo-drano lena. Ahoana no hanavahana ny hamandoana amin'ny famaohana lena? ...
Ny sokajin-taona samihafa dia mety amin'ny famafana lena
Ny sokajin-taona isan-karazany dia mety amin'ny famaohana lena, ary tsy mahazaka fanoherana ny ankizy, noho izany ireo zavatra azo kitihina dia tokony ho azo antoka sy salama amin'ny lafiny akora sy akora, indrindra ireo izay afaka mifandray amin'ny hoditra na amin'ny vava. Misy ihany koa sokajy samihafa ...
Fomba hisafidianana famafana toaka
Ahoana ny fomba hisafidianana famafana toaka? 1. Fibobohana alikaola Azonao atao ny mijery ireo fonosana ivelany sy torolàlana hamaritana aloha ny fatran'ny alikaola amin'ny tavy. Amin'izao fotoana izao, 75% ny alikaola no ampiasaina eny an-tsena, izay mety hahomby amin'ny vokatra tsara. 2. Karazana a ...
Raha ny fahitan'ny besinimaro, tenona vita amin'ny lamba nentim-paharazana. Misafotofoto ny anaran'ny lamba tsy tenona, tena mila tenona ve? Ny lamba tsy tenona dia antsoina koa hoe lamba tsy tenona, izay lamba tsy mila tenona na voatenona. Tsy fomba nentim-paharazana no nanaovana azy io tamin'ny alàlan'ny fanenomana sy ny filanjana ...
Taona adala amin'ny indostria tsy tenona manerantany
Noho ny fiantraikan'ilay valanaretina satro-boninahitra vaovao tamin'ny taona 2020, ny ankamaroan'ny indostria dia niaina fe-potoana fahatapahana, ary niato vetivety ireo hetsika ara-toekarena isan-karazany. Amin'ity toe-javatra ity, ny indostrian'ny lamba tsy tenona dia be atao noho ny hatramin'izay. Toy ny fangatahana vokatra toy ny otrikaretina wi ...
Noho ny antony maro samihafa dia nirongatra ny rojom-bidin'ny indostria simika ary nirongatra ny vidin'ny akora simika am-polony. Ny indostrian'ny vokatra ara-pahasalamana dia mbola mizaka ny vokany amin'ity taona ity ary voakasik'izany mivantana. Mpamatsy fitaovana akora sy mpanampy maro (ao anatin'izany ny polymers, spandex, ...
Ny taratasin-trano any Sina sy ny vokatra avy amin'ny fahadiovana dia manafatra sy manondrana toe-javatra amin'ny taona 2020
Fanafarana taratasy ao an-trano Tao anatin'izay taona lasa izay, ny haben'ny fanafarana amin'ny tsenan-taratasy ao an-tokantrano ao Shina dia nitohy nihena hatrany. Amin'ny taona 2020, ny habetsahan'ny fanafarana isan-taona amin'ny taratasim-pianakaviana dia 27 700 taonina fotsiny, fihenan'ny 12,67% manomboka amin'ny 2019. Ny fitomboana mitombo, ny karazana vokatra mihamaro hatrany, dia ...
Ao anatin'ny dingana tsotra 4 dia mampianara anao hisafidy famafana azo antoka! 1: Jereo ireo fangaro sy fonosana. Ny ray aman-dreny dia tsy maintsy mividy mamafa lena ny zazakely amin'ny fantsona mahazatra, ary tsy maintsy mijery azy ireo tsara izy rehefa misafidy: Ho an'ny akora vokatra, tsara kokoa ny mifidy vokatra izay misy marika mazava fa tsy conta ...
Ny mamafa ny fanesorana makiazy dia azo ampiasaina ...
Tombontsoa azo avy amin'ny famafana famonoana otrikaina amin'ny f ...
Raha te hiara-miasa amin'ny mpanamboatra anao idealy, azafady avelao ny mailakao aminay ary hifandray ao anatin'ny 24 ora izahay.